यी ३ अक्षरबाट नाम शुरु हुने पुरुषहरु जहिले पनि श्री’मतीलाई द’बाएरै रा’ख्न खोज्छन् ! – Jagaran Nepal
यी ३ अक्षरबाट नाम शुरु हुने पुरुषहरु जहिले पनि श्री’मतीलाई द’बाएरै रा’ख्न खोज्छन् !
विवाह पछि सम्बन्ध बिग्रनाले धेरैको जीवनमा नराम्रो असर पर्न जाने गर्छ। श्रीमान-श्रीमती बीच आपसमा समझदारी हुन अपरिगार्य मानिने गर्छ। भन्ने गरिन्छ कि श्रीमान आगो भए श्रीमती पानि हुनु पर्छ। तर दुवै जनाको रिस बराबर भएमा भने कहिले पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। आज हामी यस लेखमा केहि अक्षरबाट नाम शुरु हुने पुरुषहरुको बारेमा जानकारी दिनेछौ, जो अत्याधिक रिसाउने गर्छन्।